Wasiirka difaaca dalka oo gaaray magaalada Jowhar
Wasiirka wasaaradda difaaca dalka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe.
C/xakiim Xaaji Maxamuud Fiqi wasiirka wasaaradda gaashaandhiga Soomaaliya ayaa waxaa socdaalkiisa ku wehliya taliyaha ciidamada XDS, taliyaha howlgalka ciidamada AMISOM saraakiil ciidan iyo wariyeyaal.
Wasiirka difaaca dalka oo la hadlay Radio Muqdisho isagoo ku sugan magaalada Jowhar ayaa sheegay in shacabka reer Jowhar ay si wanaagsan u soo dhaweeyeen wafdigii maanta gaaray waxa uuna intaasi raaciyay in uu ku faraxsanyahay buuqashada uu ku tagay Jowhar.
Mudane Fiqi ayaa carabka ku dhuftay in qorshaha ciidamada uu yahay sidii ay ula wareegi lahaayeen dagmada Buula Barde iyo sidii ay iskugu furi lahaayeen dhamaan wadooyinka isku xira caasimada iyo gobolada dhexe ee dalka si shacabka ay ugu noolaadaan amaan.
Kormeerkan uu maanta ku tagay wasiirka difaaca dalka Soomaaliya iyo saraakiisha ka waada tirsan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa imaanaya wax ka yar mudo laba maalin ah ay ciidamada dowladda gacanta ku hayaan magaalada Jowhar waxaana booqashada wasiirka uu noqonayaa mid ay ku farxaan ciidamada u istaagay difaaca dalkooda.